Resadresaka – Page 3 – Blaogin'i Voniary
Catégorie : Resadresaka
Voniary : Ahoana ny fahitanao ny kolontsaina Malagasy amin’izao fotoana izao ? Jly RAMAKAVELO Désiré : Tsy misy intsony izany kolontsaina Malagasy izany izao. Ny maha-firenena ny firenena iray manko dia ny kolontsainy sy ny kolom-piarahamoniny. Amintsika Malagasy, azo avondrona ao anatin’ireto zavatra roa ireto izany dia ny hasina sy ny fihavanana. Ny HASINA dia fanomezana haja sahaza... Lire la Suite →